Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMartin
Iholide yokuzenzela ukutya ngamawele ivumela ilali encinci yaseNorth Norfolk kufutshane nonxweme
Isitudiyo sinegumbi lokuhlala elikhulu elinesilingi ephezulu, iibhedi ezingamawele, isofa, itafile yokutyela kunye nezitulo. Kukwakho nekhitshi elahlukileyo, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokugcina.
Ikhitshi lineooki begesi, ifriji/ifriji, imicrowave, iketile, itoaster kwaye ibonelelwa ngezitya kunye nezixhobo.
Kukho iTV eneDVD player edibeneyo enokhetho olubanzi lweeDVD ezikhoyo. I-wi-fi yasimahla iyafumaneka.
Iiduvethi kunye nelinen yokulala zikhona kodwa AKUKHO iitawuli.
Indawo leyo ayitshaywa.
Indawo yokupaka iyafumaneka kwangoko ngaphandle kweStudio.
Isitudiyo sinendawo yayo encinci yabucala kunye negadi kwaye kukho nokufikelela kumhlaba obanzi weStonebridge House kubandakanya umphambili womlambo ukuya kuMlambo iGlaven kunye ne-13th yenkulungwane yeWiveton Bridge.
IWiveton yilali ezolileyo, imayile enye kuphela ukusuka eBlakeney Quay kunye nelali yaseCley-elandelayo-uLwandle. Kukho iivenkile zokutya zasekhaya eBlakeney naseCley, kubandakanya iPicnic Fayre delicatessan kunye neCley Smokehouse.
I-Wiveton ine-pub yasekhaya, iWiveton Bell, imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka kwipropathi, kwaye, ukusuka ngePasika ukuya ku-Okthobha, iWiveton Farm Cafe imizuzu eli-15 yokuhamba. Zininzi ii-pubs kunye neendawo zokutyela eCley, eBlakeney, eHolt nakwiindawo ezingqongileyo.
Kukho iintlobo ngeentlobo zezinto ezinomtsalane zalapha ekhaya-ukusuka ekubukeleni iintaka, uhambo lokutywina olusuka eMorston, kuloliwe waseNorth Norfolk osuka eHolt ukuya eSheringham, ukuya kwindlela yaseNorfolk eselunxwemeni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wiveton